အဘ်ဒူလာ ဘင်ဆာဘာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အဘ်ဒူလာ ဘင်ဆာဘာ (عبدالله بن سبأ) ၏မည်များမှာ( ابن سوده)၊(ابن حرب)، (ابن (وهب တို့ဖြစ်လေသည်။ စဘာအီယာ ဂိုဏ်းသည် ၎င်းကို အခြေခံထားလေသည်။အချို့သော အဲဟ်လေစွန္နသ်အနွယ်ဝင်တို့သည် ၎င်းကို ယဟူဒီဟု သတ်မှတ်ကြပြီး ရှီအာမဇ်ဟဘ်သည် ၎င်းမှ စတင်ထူထောင်ခဲ့သော မဇ်ဟဘ်ဖြစ်သည်ဟု လက်ခံထားကြလေသည်။သို့သော် အချို့သောရှီအာများသည် ၎င်းသူအား (غالیان) အစွန်းရောက်သူများအတွင်းမှဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားကြ၍ ရှီအာမဇ်ဟဘ်နှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်သူမဟုတ်ကြောင်း ဆိုထားကြလေသည်။အချို့သော ရှီအာတို့ကလည်း ၎င်းသူသည် အပြင်၌ အမှန်တကယ်မရှိကြောင်းနှင့် ဆိုင်းဖ်အိဘ်နေအိုမရ် မှ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသူသာဖြစ်ကြောင်း အသိအလင်းပြောဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိရလေသည်။
စွန္နီရေဝါယသ်တော်များအရ ၎င်းသည် ယဟူဒီတစ်ဦးမှ မွစ်လင်(မ)ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ထို့နောက်အလီ(အ.စ)၏လက်ထက်တွင် အစွန်းရောက်သော အတွေးအခေါ်အမြင်များကို ဖေါ်ထုတ်ဖြန့်ဝေခဲ့လေသည်။သူသည် အလီ(အ.စ)အား အလွန်မှပင် မြှောက်စား၍ အစွန်းရောက်သူဟူ၍ သတ်မှတ်ထားလေသည်။ဥပမာ မူဆာနဗီ(အ.စ)သည် မိမိနောက်ဆက်ခံမည့်သူ ယူရှအိဘ်နေနူးန်(အ.စ)အားသတ်မှတ်သကဲ့သို့ အလီ(အ.စအားလည်း တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ နောက်ပိုင်းဆက်ခံမည့်သူအဖြစ် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်မှ သတ်မှတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားလေသည်။ထို့အပြင် ၎င်း၏အမြင်တွင်အလီ(အ.စ)သည် သေဆုံးသွားသူမဟုတ် တနေ့အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ရန်အတွက် ပြန်လာလိမ့်မည်။အလီ(အ.စ)သည် အလ္လာဟ်ဖြစ်ပြီး သူသည်ကောင်းကင်ယံသို့တက်သွားလေသည်။မိုးခြိမ်းသံနှင့် ကောင်းကင်ယံမှ လာသောအသံတို့သည် အလီ(အ.စ)၏ အသံများဖြစ်ပေသည်။ဟုလည်းစွန္နီတို့၏ရေဝါယသ်တော်များတွင် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆင့်ပြန်ထားလေသည်။သွဘရီနောက်ပိုင်း အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့သမှ အိဘ်နေစဘာသည် မိမိ၏ လှည့်ဖြားမှုများဖြင့် သာဝကများအကြား သွေးခွဲခဲ့သည်ဟု လက်ခံထားကြသည်။ရေးသားထားသည်မှာ ၎င်းသည် အီဂျီစ်သားတို့အကြား အလီ(အ.စ)၏ ခေလာဖသ်အရိုက်အရာ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် အွစ်မာန်အပေါ်ပုန်ကန်ရန် ဆော်ဩခဲ့လေသည်။ထို့နောက် ၎င်းကြောင့် အွစ်မာန်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ထို့အပြင် အလီ(အ.စ)နှင့် သွလ်ဟာ၊ဇိုဘေးရ်တို့အကြား မီးမွှေးသူသည် ၎င်းသာဖြစ်ကြောင်း ခံယူထားလေသည်။
ရှီအာတို့အမြင်တွင် ၎င်းသည် အစွန်းရောက်သူ(غالیان)တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အေမာမ်ဂျာအ်ဖရ်ဆွာဒိက်(အ.စ)သည် ၎င်းအပေါ်လာအ်နသ်ပို့သထားလေသည်။အလီ(အ.စ)မှလည်း အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေစဘာသည် သူ့အား အလ္လာဟ် ဟုသတ်မှတ်သည့်အတွက် ၎င်းနှင့် ၎င်း၏အပေါင်းအပါအားလုံးကို မီးရှို့သတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့လေသည်။ရှီအာအစ်မာအီလီယာ ကျမ်းတစ်ကျမ်းတွင် ၎င်းသည် ဒဏ်ရာရကာလွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်ဟု ရေးသားဖေါ်ပြထားလေသည်။
အစ္စလာမ့်စွယ်စုံကျမ်းတွင်ရေးသားထားသည်မှာ အဘ်ဒုလ္လာဟ်ဘိဘ်နေစဘာကို လုပ်ကြံဖန်တီးတည်ဆောက်ရာတွင် နောက်ကွယ်၌ မည်သူရှိနေသည်ကို အတိအကျ ရေးသားထားခြင်းမရှိပါ။သို့သော် အဘ်ဒုလ္လာဟ်ဘိဘ်နေစဘာအ်၏ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အွစ်မာန်အပေါ်ပုန်ကန်တော်လှန်မှုများပင် ဖြစ်လေသည်။အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေစဘာနှင့်ပတ်သက်ပြီး စတင်ဖေါ်ပြခဲ့သောသူမှာ ဆိုင်းဖ်အိဘ်နေအိုမရ်သာဖြစ်သည်ကို သွဘရီမှ မီးမောင်းထိုးပြထားလေသည်။ဇဟဘီဆိုသော အဲဟ်လေစွန္နသ်အကျော်အမော ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးသည် ဆိုင်းဖ်အိဘ်နေအိုမရ်နှင့ပတ်သက်ပြီး ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကို ရှု့ချပြောဆိုရေးသားထားလေသည်။ဝလ်ဟာဇန်သည်လည်း ၎င်းအား ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိသူတစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြောဆိုထားလေသည်။ပိုမိုခိုင်လုံသည့်အခြားအရေးအသားတစ်ခုတွင် အိဘ်နေစဘာသည် နိုင်ငံရေးတွင် မည်သည့်အရေးပါသော လုပ်ဆောင်ချက်မှ မလုပ်ဆောင်ခဲ့သူဟ၍လည်းတင်ပြထားလေသည်။ဖရ်လာန်ဒရ် မှ ယုံကြည်လက်ခံထားသည်မှာ အိဘ်နေစဘာသည် အလီ(အ.စ)အား အလ္လာဟ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သူမဟုတ်ပါ။ သို့သော် သူသည် အလီသည် လူအမြင်တွင် သေဆုံးသွားသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသော်လည်း အမှန်တကယ်မှာတော့ဖြင့် အလီ(အ.စ)သည် သေဆုံးသွားသည်မဟုတ် တစ်နေ့တွင် ကောင်းကင်ယံမှ ပြန်လည်ဆင်းသက်လာမည်ဟု သာ ပြောဆိုလက်ခံထားသည် ဟု ဖြစ်သည်။အမှန်တကယ်တော့ ဤသို့သော ခံယူချက်သည် ယီမန်ဒေသရှိ ယဟူဒီတို့၏ခံယူချက်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပေသည်။ကာအီသာနီဆိုသူသည် အိဘ်နေစဘာအ်အား နိုင်ငံရေးလောက၌ ၎င်းသည် အလိ(အ.စ)နှင့် ၎င်းနောက် ဆက်ခံမည့်သူတို့အားထောက်ခံအားပေးပြီး အဘာစီမျိုးနွယ်စုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်လှုပ်ရှားသူဟု သတ်မှတ်ထားလေသည်။
အစ္စလာမ့်စွယ်စုံကျမ်းတွင် ရေးသားထားသည်မှာ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေစဘာနှင့်ပတ်သက်သည့် ရေဝါယသ်တော်များနှင့် စဘာအီယာဂိုဏ်းနှင့်ပတ်သက်သောရေဝါယသ်တော်များအကြား မည်မျှပင်ကိုက်ညီမှုများမရှိပါစေ။၎င်းသည် အလီ(အ.စ)ကို သေဆုံးသွားသူဟု သတ်မှတ်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့လေသည်။အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့၏အရေးအသားများတွင် ၎င်းသူသည် ယဟူဒီဟု ရေးသားထားသော်လည်း ၎င်းသည်ယဟူဒီတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ထို့အပြင် ၎င်းသူသည် စဘာအီယာ ဂိုဏ်းကို တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။၎င်းစဘာအီယာဂိုဏ်းသည် အလီ(အ.စ)နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်မှု လွန်ကဲသောအစွန်းရောက် ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းဖြစ်ခဲ့လေသည်။ဟုဖြစ်သည်။စွန္နီတို့၏ရေဝါယသ်တော်များတွင် ၎င်းအား ယဟူဒီမှ မွတ်စလင်(မ)ဖြစလာခဲ့သူဟု ဆိုထားကြပြီး ၎င်းသည် မိမိ၏ကောက်ကျစ်သော အကြံအစည်များဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သာ၀ကများအကြား သွေးခွဲခဲ့သူဟူ၍လည်း ဖေါ်ပြထားလေသည်။သူသည် အီဂျစ်သားများကို တတိယမြောက်ခလီဖှာ အွစ်မာန်းအား ပုန်ကန်ထကြွရန် လှုံဆော် ခဲ့သည်ဟုလည်းရေးသားထားလေသည်။ရှီအာတို့၏အမြင်၌ ၎င်းသူသည် (ဂါလီ)အစွန်းရောက်သူများအတွင်းမှ တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။၎င်းသူသည် အလီ(အ.စ)အား ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပြီး လူထုအကြားဝါဒဖြန့်ခဲ့သည့်အတွက် အလီ(အ.စ)သည် ၎င်းသူနှင့်အပေါင်းအပါတို့အား မီးရှို့သတ်ရန် အမိန့်ထုတ်ကာ ထိုသို့သတ်စေခဲ့လေသည်။
ဆယိဒ်မွရ်သဇာအစ္စကရီသည် "အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေစဘာ" ဟူသောကျမ်းနှင့် အခြားလုပ်ကြံဖန်တီးထားသော သမိုင်းများကို မဟုတ်မမှန်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသောကျမ်းများတွင် ရာစုနှစ်(၅)ခုမတိုင်မီတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသော သမိုင်းပြုစုသူတို့၏ ဆင့်ပြန်ခဲ့သော ရေဝါယသ်များကို လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရာ ၎င်းရေဝါယသ်အားလုံးတို့သည် ဆိုင်းဖ်အိဘ်နေအိုမရ်سیف ابن عمر ထံမှ ဆင့်ပြန်ထားသောရေဝါယသ်များသာ ဖြစ်ပေသည် ဟူ၍ ဆိုထားလေသည်။ သွဘရီ၊ဇဟဘီ၊အိဘ်နေအဘာဘက်ရ်နှင့် အိဘ်နေအစာကိရ်တို့သည် စိုင်းဖ်အိဘ်နေအိုမရ်ထံမှ ရေဝါယသ်ကို တိုက်ရိုက်ဆင့်ပြန်ခဲ့သူများဖြစ်ကြလေသည်။ထို့အပြင် ကျန်သမိုင်းဆင့်ပြန်သူတို့သည် ထို(၄)ဦးထံမှ ဆင့်ပွား ဆင့်ပြန်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ထိုသို့ဆင့်ပွားဆင့်ပြန်သူများမှာ -(၁)ဆိုင်ယိဒ်ရရှီးဒ်ရေဇာ(၂) အဘွလ်ဖဒါ (၃)အိဘ်နေအစီးရ် (၄) အိဘ်နေကစီးရ်(၅)အိဘ်နေခလ်ဒူးန် (၆) ဖရေးဒ် ဝဂျဒီ (၇) ဘွစ်သားနီး(၈)အဟ်မဒ်အမီးန်(၉)ဟစန်အိဘ်ရာဟီးမ်(၁၀) ဖါန်းဖလ်သူးန်(၁၁) နီကွလ်စူးန်(၁၂) အစ္စလာမ့်စွယ်စုံကျမ်း (ဒါအေရသွလ်မအာရဖ်ဖေအစ္စလာမီ ကျမ်းကိုရေးသားသူ)(၁၃)ဒဝါသ် ဒိုနာလီဒ်စွန်း(၁၄)ဝီလ်ဟာဝဇ်န်(၁၅) မီးရ်ခွါးန်ဒ်(၁၆)ဂေယားစွဒ်ဒီးန်(၁၇)အိဘ်နေဘဒ်ရားန်(၁၈)စအီးဒ်အဖ်ဂါနီတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဆယိဒ်မွရ်သဇာ အစ္စကရီသည် အဲဟ်လေစွန္နသ်ကျမ်းများအတွင်း ဖေါ်ပြထားသော အီလ်မေရေဂျားလ် ပညာရှင်ကြီး(၁၂)ဦး၏ အမြင်များကို ဆက်လက်လေ့လာရာ၌လည်း ၎င်းပညာရှင်ကြီးတို့မှလည်း စိုင်းဖ်အိဘ်နေအိုမရ် ထံမှ ဆင့်ပြန်ထားသောရေဝါယသ်များအားလုံးကို ခိုင်လုံမှုမရှိသော ရေဝါယသ်များဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရလေသည်။ ယင်းပညာရှကြီး(၁၂)ဦးတို့၏အမည်များမှာ -(၁) ယာဟ်ယာ အိဘ်နေမိုအီးန် (၂) နေဆာအီ (၃) အဘူဒါဝူးဒ် (၄) အိဘ်နေအဘီဟာသမ် (၅) အိဘ်နေ အလ် စက်န် (၆) အိဘ်နေဟဘားန် (၇) ဒါရ်ရွလ်ကသွ်နီး (၈) ဟာကင်မ်(၉) ဖီးရူးဇ်အာဘာဒီ (၁၀) အိဘ်နေဟဂျရ် (၁၁) ဆယူတီ (၁၂) ဝစ်ဖီဒီးန် တို့ဖြစ်ကြလေသည်။
↑ Jump up to:۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ Hodgson, “ʿAbd Allāh b. Sabaʾ”, 1:‎ 51.
Hodgson, M.G.S. “ʿAbd Allāh b. Sabaʾ”. In Encyclopaedia of Islam. vol. 1, A-B. second ed. Leiden: E. J. Brill, 1986. 51. ISBN ‎90-04-08114-3.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဘ်ဒူလာ_ဘင်ဆာဘာ&oldid=440993" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၈:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။